Posted by laylwintlu at 01:100comments
မင်းအချစ်ကြောင့် - ဝိုင်ဝိုင်း
Posted by laylwintlu at 19:320comments
Posted by laylwintlu at 11:340comments
မင်းအကြောင်းခြေရာ ချန်ထားရစ်လို့ ...
မင်းအကြောင်းတွေ တွေးခွင့်ရလို့ ...
ရင်ခုန်ခြင်းရဲ့ဘာသာစကားတွေ
မဆုံနိုင်တာ ကြမ္မာတရားလို့ 
ရနံ့ သင်းသင်း ဒီချစ်ခြင်းမှာ
တွေ့ ဆုံခြင်းက မထင်ကျန်လည်း
ပုံရိပ်ယောင်တွေ ကြွင်းကျန်ရစ်ဆဲပါ မေ ...... ။ ။
Posted by laylwintlu at 12:432comments
ဘယ်တော့မှ လွမ်းဆွတ်မနေပါစေနဲ့..
ရင်ခွင်ကြားက တင်းအားတစ်စုံရဲ့ 
ပြိုပျက်ခြင်း ရာဇဝင်သက်သက်တွေပါ ..
နုပျိုမှုရဲ့တစ်ဆိတ်တစ်ဒေသတော့
ရန်မူမှုတွေ ငါရင်ဆိုင်ဆဲပဲ ..
မရေရာခြင်း စိတ်ကူးသက်သက်တွေ ....။ ။
Posted by laylwintlu at 12:472comments
Posted by laylwintlu at 16:030comments
2for friends for friends
Posted by laylwintlu at 09:192comments
သတင်းကွန်ယက်: ပီနန်မြို့မှ မောင်ဇင်အောင်စိုး၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ေ...
သတင်းကွန်ယက်: ပီနန်မြို့မှ မောင်ဇင်အောင်စိုး၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ေ...: ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၅ ရက်နေ့က မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ပီနန်မြို့သို့ လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မောင်ဇင်အောင်စိုးသည် အလုပ်မှ ဆိုင်ကယ်စီး၍ြ...
Posted by laylwintlu at 12:50 1 comments
အခါမှီ မိုးရဲ့ခပ်ဖျော့ဖျော့ခြေရာ
တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ နေ့ စွဲတွေကိုမှ
ငါတို့ နှစ်ဦးရဲ့ နောက် အဖြူဖြူသက်သက်
မျှော်လင့်ချက်ပါပါ မျက်ရည်တွေနဲ့ 
တူညီတဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ စည်းချက်လိုက်ရင်
ခေါက်ရိုးကျိုးရင်ခုန်သံတွေဆန့် လို့ 
နင်ရောငါရော ကျန်တစ်ဖက်နှလုံးသားကိုယ်စီနဲ့ 
ဘဝကို မမေ့ပျောက်သင့်ပဲ မေ့ဖျောက်ထားရမှာပါပဲ။ ။
Posted by laylwintlu at 23:033comments
ကြယ်ကြွေ ညဉ့်နက်နက်ရဲ့ 
ရင်ခုန်သံနဲ့ဆွဲကြရင်း
တစတစအက်ကွဲကြောင်းကို ပြန်ဆက်ယူဖို့ 
ကြီးမားတဲ့ မြို့ ပြတစ်ခုလည်း မဟုတ်ဘူး..
နေ့ ရက်တွေ ရွေ့ လျားနေလည်း
ဘာမှလည်း မမြဲဘူး.........။ ။
Posted by laylwintlu at 16:213comments
လေလွင့်ရဲ့ရိုက်မိရိုက်ရာ အခြာခြာ...
" မြန်မာရွာ" စားသောက်ဆိုင် (kuala Lumpur) အဆင်းရိုက်လိုက်တာ :Pဘေးကပ်လျက်မှာ မြန်မာဆိုင်တွေအများကြီးပဲ:)
ဒါက မျက်နှာစာက လျှပ်တပြတ်သေချာရိုက်ချက်:P
လမ်းကြောင်းရှာရင်း ဦးတည်ရာ ရိုက်ချက်!
အဆောင်မှာ တည်ထားကိုးကွယ်ထားတဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓ *****
မီးပွိုင့်လွှတ်နေတာကို ရပ်စောင့်ရင်း အဲ့လိုရိုက်လိုက်သည်။
တွေ့ ပါပြီး ဦးတည်ချက်ပစ်မှတ်ဆီ..
kL China Town ထဲ လျှောက်ရင်း ခပ်သွတ်သွတ်ရိုက်ချက်!
ဝယ်သူရောင်းသူ စည်းကားတဲ့ တရုတ်တန်း...
ဝယ်ဖြစ်လိုက်တယ် ဘိနပ်တစ်ရံတော့...(ဈေးပေါတယ် ရောင်းတဲ့သူကမြန်မာပဲ ပြောနေတာတွေကတော့
တရုတ်စကား၊အင်္ဂလိပ်စကား ကျွန်တော်တို့ နားမလည်မှန်းသိလို့ ထင်တယ် မြန်မာလိုပြောပေးတယ်):p
Posted by laylwintlu at 08:33 1 comments
Labels: အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများ
အဖြစ် အပျက်တွေကြား သံသရာလည်..
ဆယ်ရင်း မျော၊လှော်ရင်း နစ်
အချစ်နဲ့ကာမဂုဏ်၊ အာရုံတွေ အနှောနှော
အနိမ့်အမြင့် တွယ်ရာမဲ့ လေတံခွန်တစ်စင်းလို
တခါတခါ စည်းဝါးညီညီ အသက်ရှုသံတွေ..
တခါတခါ စည်းဝါမညီ ထွက်သက်တွေ..
တစ်ရစ်ရစ်တက်လာနေတဲ့ သက်တမ်းနဲ့ နောက်ပါတွေက
ငါ့ဇီဝကိုခြွေဖို့ ပဲ ခြိမ်းခြောက်နေတယ်...
Posted by laylwintlu at 04:323comments
ငါနဲ့ အွန်လိုင်း၊ အွန်လိုင်းနဲ့ ငါ
ငွေ(၃၀၀)ကျပ်နဲ့ဖင်ပူအောင်မထိုင်ခဲ့ရသမျှ
ငွေ(၃)ကျပ်နဲ့(၂၄)နာရီအကြိုက်သုံးရတဲ့ အွန်လိုင်း..
ဘယ်တော့မှ မပျက်တဲ့ မီး..
"အချိန်မှန် အိပ်၊အချိန်မှန် စား"
ဒီစကား ငါ့ဘက်တော့ နားအတော်ခါး
ဗဟုသုတနဲ့တရားဆိုဒ်
သိပ်မကြာခင် လူ့ စရိုက်
အွန်လိုင်းတစ်ခွင် ခရီးနှင်လို့ 
ဟိုလူ Add၊ ဒီလူ Add
chating ဇာတ်နဲ့နေ့ ညမကွဲ
ငဖြူကို ငမဲပြော၊ငညိုက ငနီဖြစ်
အအိုက အပျိုဖြစ်၊ ပျိုမျစ်နေကြတာ
မုသားဝါဒနဲ့ကာမေသုတရား
အဆန်းသစ်လို့အမှန်အမှားကြား
မရေရာ ကောက်ချက်တွေနဲ့ 
ဘယ်လိုယုံကြည်မှုတွေ အသားပေးလို့ 
Posted by laylwintlu at 17:266comments
So Tay - အဝေးရောက် ချစ်သူ
Posted by laylwintlu at 18:18 1 comments
Posted by laylwintlu at 18:080comments
Tha thi Ya nya Nay Khinn သတိရညနေခင်း - Zay ye Feat - ရဲလေး Vs KH$
Posted by laylwintlu at 17:520comments
A Yin Lo Chit Sel Min Ko ( Chan Chan )
Posted by laylwintlu at 17:400comments
နာနာကြင်ကြင်နဲ့ဖြတ်ခဲ့ရတယ် မေ..
မေ နင်းဖြတ်သွားတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းဟောင်းကတော့
ရင်တွင်းအသစ်သစ်တွေ ဆက်လို့ နေဆဲ..
ရင်ခွင်ဟာ ကွက်လပ်တစ်ခု လွမ်းဒဏ်ရာ နာကြင်မှုတွေ
မေ... မရှိတဲ့နောက် မေ.. မသိတဲ့နောက်
ငါကိုယ်တိုင်မသိနိုင်တဲ့ အချစ်ရဲ့ ဒဿနတွေ
ပြောပြစာဖွဲ့ နေရုံ အရာမထင် အရိပ်မကျန်
အချစ်ရဲ့ အစ ကြေကွဲခြင်းအဆုံး
နာနာကြင်ကြင်ပဲ ပြုံးကာနေမယ် မေ..
ကိုယ်တို့ နှစ်ဦး လမ်းဆုံးရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်း
မေ့ရဲ့ အပြုံးပန်း ရယ်သံတွေ
Posted by laylwintlu at 10:414comments
ငါ အခုတော့ တိတ်ဆိတ်နေရပြီ....
တခါခါ ငါကိုယ်တိုင်လည်း အံ့သြမိတယ်...
မျှော်လင့်ချက် အသေတွေ ဆုပ်ကိုင်
မေ့လို့ မရသေးတဲ့ ငါ့နှလုံးသား အဖြေစကား
အမှန်တကယ်ကို စွန့် အ နေတာပါ....။ ။
Posted by laylwintlu at 15:194comments
နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္ပာ သမ္ဗုဒ္ဗဿ
ထာဝစဉ် အဓွန့် ရှည်တည်တံ့ပါစေသတည်း။ ။
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ်
တန်ခူး လပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်
(နှစ်ဆန်း ၁ရက်နေ့ )
Posted by laylwintlu at 16:55 1 comments
အတာနဲ့ပိတောက်
ပိတောက်ဝေ ငုကြွေတွေ ပဏာတင့် အလှ
အလှူအတန်း စည်းပေါတဲ့ ဒီဂိမ္မာန်
အဖော်တစ်သင်း ပျော်မြူးကြတဲ့ အချိန်မှန်
ညီရင်းနှမရင်း ချစ်ခင်နှီးလို့ရေကစားကြတဲ့ ရိုးရာအမှန်
နှစ်ဟောင်းကိုဆေး နှစ်သစ်လေးမှာ အေးမြလှတဲ့ အတာရေသင်္ကြန်
အကြိုထောက်လို့ရိုးရာကယ်မပျောက်
ရပ်ကြီး ရွာကြီး အလှူကြီးနှင့် ခြိမ့်ခြိမ့်ကယ်ညံ
မြန်မာဟာ ကမ္ဘာလည်မှာ သဒ္ဒါရယ်ကြွယ်
ရဟန်းခံပြုဖွယ်မှန်နှင့် ကုသိုလ်ရေးမှာ နိုးကြွားပြန်
ဘိုးဘွားမကျန် ခြေစုံခင်းလို့ဥပုတ်သီလစောင့်တည် အမှန်
အခါထူး လရယ်ကွယ် တကယ်ထူးတဲ့ ဒီတန်ခူး သင်္ကြန်
သက္ကရာဇ်တွေဟောင်း နှစ်တွေပြောင်းလို့ 
အတာနဲ့ပိတောက် ဒီချိန်ရောက်ရင်
ငါတစ်ယောက် လွမ်းနေတယ် သင်္ကြန်......
လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ သင်္ကြန်ရက်များအတွက် အလွမ်းပြေ ရေးဖွဲ့ သည်။)
Posted by laylwintlu at 14:102comments
တုန့် ပြန်ဖို့ တော့အချိန်ပေးပါ
(ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ရေးထားတယ် ဆိုတာ မသိပေမယ့် တချို့ စကားလုံးတွေဟာ အတော်လေး တွေးလို့ကောင်းတာကြောင့် ဘာသာပြန်ပြီး အားလုံးကို မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။ အတွေးပွားနိုင်ကြပါစေ။)
အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်း ဆိုတာ ...
ထိုင်ခုံလေးပေါ်မှာ အတူထိုင်ရင်း ဘာစကားမှ မပြောလိုက်ရဘဲ ငေးမောပြီး ခွဲခွာသွားကြပေမယ့် ရင်ထဲမှာ တူမတူနိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေ ကိန်းအောင်းသွားစေတာ သူငယ်ချင်းကောင်းပါ။
အချစ်ဟာ အပြုံးနဲ့ စတင်တယ်။ အချစ်ကြောင့်ဘဲ သင်ဟာ ရှင်သန်လာပြီး မျက်ရည်နဲ့ အဆုံးသတ်တယ်။
(From Forward Mail)
စာညွန်း-စာဖတ်များသော သူငယ်ချင်းမှ ကောင်းနိုးရာရာများ ရွေးချယ်ပေးပို့ ခြင်းအား ပြန်လည်မျှဝေလိုခြင်း
Posted by laylwintlu at 09:55 1 comments
မြန်မာနိုင်ငံရှိပထမစခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ* *
1. ပထမဆုံးသမ္မတ= စဝ်ရွှေသိုက် 2. ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်= ဦးနု 3. ပထမဆုံးအနောက်တိုင်းဆေးဒေါက်တာ = ဒေါက်တာ ရှောလူး ... 4. ပထမဆုံးဘိဓာန် ရေးသားသူများ= မက္ခရာမင်းသားနှင့် မစ္စတာလိန်း(ဒေါက်တာ ဆင်မျူယ်ဂျွန်ဆင်၏ အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်ကို ပြန်ဆို) 5. ပထမဆုံးသိပ္ပံစာပေ ပြုစုသူ= ယောမင်းကြီးဦးဘိုးလှိုင် 6. ပထမဆုံးအမျိုးသားကောလိပ်မှဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရ သူ=အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆရာကြီးဦးရာဇတ် 7. ပထမဆုံးအင်ဂျင်နီယာ =ဖန်ချက်ဝန် ဦးရွှေအိုး 8. ပထမဆုံးနိုင်ငံရေးသမားအကျဉ်းကျခံရသူ =ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ 9. ပထမဆုံးလူမှုဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး = ဒေါ်ဦးဇွန်း (ပထမုပ်ရင်ြမင်းသားမောင်ဘဌေး(ခေ) ဦးညီပု။) 10.ပထမဆုံးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်= ဦးညီပု 11.ပထမဆုံးမြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူထောင်သူ နှင့် ဒါရိုက်တာ =လန်ဒန်အတ်ဦးအုန်းမောင် 12.ပထမဆုံးမြန်မာ့ရုပ်ရှင်စတန့်မင်းသား= ကျော်စိုး 13.ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုရ မင်းသား= ဦးကျော်ဝင်း 14.ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုရ မင်းသမီး =ကြည်ကြည်ဌေး 15.ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုရ ကလေးသရုပ်ဆောင်= အောင်ထွန်းလေး 16.ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုရ ဇာတ်ပို့ဆု အမျိုးသား= ဦးကျောက်လုံး 17.ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုရ ဇာတ်ပို့ဆု အမျိုးသမီး=ဒေါ်မေနွဲ့ 18.ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုရ ဒါရိုက်တာ = ဦးသုခ 19.ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားသွားဆိုင်းဆရာ = စိန်ဗေဒါ 20.ပထမဆုံးကာလပေါ်ဝတ္ထုရေးစာရေးဆရာ =ဂျိမ်းစ်လှကျော်(မောင်ရင်မောင် မမယ်မ ၀တ္တု) 21.ပထမဆုံးသတင်းစာ ဆရာမ = အင်ဒီပင်းဒင့်ဒေါ်စန်း 22.ပထမဆုံးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီးပါမောက္ခ =ဦးဖေမောင်တင် 23.ပထမဆုံးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာ ကထိက= ဒေါက်တာဘမော် 24.ပထမဆုံးစတီရီယို အဆိုတော် = တက္ကသိုလ်ထွန်းနောင် 25.ပထမဆုံးလေသူရဲ =မီးပုံးပျံ ဦးကျော်ရင် 26.ပထမဆုံးစက်ရုပ်တီထွင်သူ =ဦးကြည် 27.ပထမဆုံးနယ်လှည့်ဇာတ်သဘင် = ဂရိတ်ဦးဘိုးစိန် 28.ပထမဆုံးမြန်မာလူမျိုး ဟိုက်ကုတ်တ ရားဝန်ကြီးချုပ် =ဒေါက်တာဆာမြဘူး (၁၈၈၅-၁၉၆၆) 29.ပထမဆုံးမြန်မာပါရဂူ=ဒေါက်တာဘဟန်(၁၈၉၀-၁၉၆၉) (ပြင်သစ်နှင့်ဂျာမနီပြန်) 30.ပထမဆုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နှင့် အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန တည်ထောင်သူ=ဒေါက်တာတင်လှိုင် 31.ပထမဆုံးမြန်မာ ကာတွန်းဆရာ = ဦးဘကလေး(ရွှေတလေး) 32.ပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ =ပညာမင်းကြီးစည်သူဦးကောင်း 33.ပထမဆုံးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်=ဒေါက်တာတင်မောင်c 34.ပထမဆုံးဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ(ဗ-က-သ)၏ ဥက္ကဋ္ဌ=ဦးရာရှစ် 35.ပထမဆုံးကျားကစားနည်းစာအုပ်ရေးသူ=စာရေးဆရာချစ်ညို (၁၉၂၄ -၁၉၈၇) 36.ပထမဆုံးလူမှုထူးချွန်ပထမဆင့်ကို ရရှိသူ အမျိုးသမီး=ဟာဂျီမ ပျဉ်းမနားဒေါ်ပု(၁၉၀၆-၁၉၈၂) 37.ပထမဆုံးဖလောရင့်နိုက်တင်ဂေးဆု ရရှိသူ=ဗိုလ်မှူး ဒေါ်ခင်အုန်းမြ(ခေါ်) စာရေးဆရာမကြီး မြမာလာ 38.ပထမဆုံးမြန်မာ ကိုယ်ခန္ဓာအလှူရှင်= ဦးဝင်းမြင့်(မန္တလေး)
**သူငယ်ချင်းတစ်ဦးထံမှ ပေးပို့ ခြင်းအား ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်**
Posted by laylwintlu at 06:36 1 comments
Pag-ibig - Yeng Constantino (Guitar Tutorial + Lyrics + Cover)
Posted by laylwintlu at 18:540comments
Posted by laylwintlu at 17:230comments
နှင်းဆီနီတွေ တိမ်ပြာတွေအောက် အရောင်တောက်ချိန်
ရာသီလွန် မုတ်သုန်တွေရဲ့ ကျီစားခြင်းနောက်ကွယ်မှာ
နာမတွေမဖော်ရသေးခင် အသစ်သစ်သော ဝေဒနာတွေက
ချည်နှောင်ခြင်း ဖျော့ဖျော့ကို ဝမ်းနည်းပြိုဆင်းခြင်းနှင့်အတူ
အရိပ်တွေထင်နေဆဲ အတိတ်ရက်စွဲ စွန်းစွန်းတွေ
နေ့ ညကူးသန်းချိန်လေး ချခွဲမှုမဟုတ်တဲ့ ကျကွဲခြင်း အလွဲတွေကြား
ချစ်ခြင်းတံခါးဝလေးတင် ဝိညာဉ်တွေဝဲပျံလို့ 
ခိုနားခြင်းအတွက် အန်တုနိုင်ဖို့ခွန်အားတွေ အငွေ့ ပျံသွားပြီ...
အရပ်မျက်နှာမူရာ စွဲလမ်းမှုတွေ ချုပ်ကိုင်ဆဲပဲ
ပျောက်ဆုံးမှု လမ်းဆုံးမှာ ရပ်နေရင်း
အက်ရှရှသံစဉ်စီးကြောင်းနဲ့နက်ရှိုင်းစွာပျော်ဝင်နေတဲ့
ငါကိုယ်တိုင် မြေမြှပ် သင်္ချိုလို့မရတဲ့ စွဲလန်းမှုတွေ....
မာနသရဖူရှင် ချစ်နတ်သမီးရဲ့ ပြုစားခြင်းတွေ
အရှုံးပေး ဝင်ခံခြင်းတွေနဲ့ငါ.....
Posted by laylwintlu at 05:04 1 comments
ရာသီစာ ပစ် ပေါ်ဦးပေါ်ဖျားကြား
ဆန္ဒတွေ ဆန်အတက် အလှည့်မတတ်တော့
ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့ဒဏ်ချက်
ခိုင်မာချက်မှာ ဂဟေအထပ်ထပ်နဲ့ 
အများအခါး လိုက်ခါးနိုင်ဖို့ 
ကြမ်းကြားထက် လေ အဝသယ်ဖို့ 
သိက္ခာတရားတွေနဲ့ထုတ်ပိုးနေတယ်။ ။
Posted by laylwintlu at 02:352comments
နေ့ ခင်းမှာ လမသာ
စာနာတတ် နှလုံးသားတစ်ခုပဲ လိုအပ်တာ။
အပိုဇာတ်ခင်းပြီး ငါ့လည်ပင်း အခါခါနင်း
အရင်းဆွတ်ရင် အရင်းပဲ ညှိုး၊
အကင်းဆွတ်ရင်လည်း အကင်းပဲ ညှိုးရမှာ
ဒါဟာ ဓမ္မတာပါ သူငယ်ချင်း။
သူတစ်ပါး အရေး ကိုယ်ချင်းစာမပေးတောင်
ခပ်နှောက်နှောက်တွေ လာမပေးစမ်းပါနဲ့ ။
(ခပ်စားစား သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သို့ ....)
Posted by laylwintlu at 11:542comments
ဘယ်သစ္စာနဲ့နောက်ယောင်ခံလိုက်မှာလဲ
တွန့် ကြေအိပ်မက်ရဲ့ခေါက်ရိုးတွေ
ပြန်ဆန့် နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင်
အရာမထင်ကျန်စေ ဖို့ ခက်တယ်
မနစ်နာစေဖို့ပစ်ခွာနေတာလိုစိတ်ကို
မာနတွေနဲ့အလဲလှယ်လုပ်သွားတယ်
နံပါတ်တစ်ရဖို့နံပါတ်ဘယ်လောက်တွေ ပစ်ချရမယ်ဆိုတဲ့
သံယောဇဉ်ကိုက ဆေးမခြောက်မှန်းသိသိကြီးကို မှီခဲ့မှာတော့
ပျော်ရွှင်မှု လှိုင်းကြပ်ခွပ်မှာ ခဏတာ လေပြေညှင်းလောက်နဲ့ကျေနပ်ပါတယ်
အတွေးအိပ်မက်ရဲ့အပိုင်းစတွေ
ဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ဘာတွေမှဆွဲမဆန့် ချင်တော့ဘူး
နေ့ နဲ့ ည ဝေဒနာခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာ
အကြီးမားဆုံး ရက်စက်မှုတွေ ဖြစ်နေတာ
နောက်ဆက်တွဲ ထိန်ချန်မှုတွေနဲ့ 
စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ အလွမ်းက အသစ်အသစ်ရက်စွဲတွေထက်
ပြန့် ကြဲနေမှာတော့ အမှန်ပဲ။ ။
Posted by laylwintlu at 02:252comments
မင်းနဲ့ အပြီးသတ်ဝေးရာမယ်ဆိုတဲ့ တစ်ညက
လွမ်းခြင်းတွေ မငိုအောင် ငါထိန်းခဲ့တယ်
မိုးသောက်ချိန်ရဲ့ ရှိုက်သံတွေ ငါမပိုင်ခဲ့ဘူး
စိတ်သစ်ကိုယ်သစ်နဲ့နေ့ ရက်တွေမှာ
အလွမ်းပြိုတဲ့ ရက်စွဲတွေ ငါမပိုင်ခဲ့ဘူး
မင်းအတွက် နယ်မြေသစ်ဆိုတာတွေ အမြဲစိမ်းလန်းနေဖို့ 
ငါ့ရင်ခွင်ကို ဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်တွေ ငါမပိုင်ခဲ့ဘူး
တခါခါ အနေမတတ်တဲ့ ငါ့နှလုံးသားကိုတောင်
(မင်းအတွက် ရတဲ့ဒဏ်ရာဆိုတာ ငါ့အတွက် အသေးဖွဲပါ....)
Posted by laylwintlu at 03:102comments
မင်းရော ငါရောခံစားချက်ကိုယ်စီနဲ့ 
လမသာတဲ့တစ်ညက ငါ လမင်းနဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်
ဥသြဌက်ရဲ့ ဆိုတေးတွေကို ငါတားမရခဲ့ဘူး
ငါ့လက်ထဲက ပန်းတွေကိုလည်း မနွမ်းစေချင်ဘူး
ငါရနံ့ ရှိုက်ဖို့ အမေ့မှာ ပန်းလေးငိုက်ခဲ့တယ်
အချစ်ဆိုတာကို သက်တမ်းတိုးဖို့ ငါကြောက်တတ်နေပြီ
ရက်လွန်နေတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ပဲ
ဗလာနေ့ စွဲတွေကို ဆက်ပြီးလှော်ခတ်နေဆဲပါ။
အိပ်မက်တွေသာ တရားစွဲလို့ ရရင်
တောင်းဆိုမိမှာအမှန်ပဲ ကောင်မလေး.....။ ။
Posted by laylwintlu at 13:322comments
“ဆိုးပါ့ လောကကြီးရယ်”လို့ 
အတောင်တစ်ဖက်နဲ့ ပဲ အားစိုက်ပျံ့ ဖို့ 
ခွန်အားတစ်စုံ ပဲ့ကျန်နေသေးလို့ ...။
အဖြစ်အပျက် အတက်အဆင်းနဲ့ 
ငါ့ အရိပ် ငါတက်နင်းမိတာတော့ အခါခါပဲ။
ငါလည်း ထပ်ဟန်ဆောင်ဖို့ မှမလိုတော့
ခုနှစ်ထွေအကရဲ့တစ်ည
ဘာတွေ.. ညာတွေ.. ဆိုတာနောက်ထား
အရင်ဆုံး ငါ့အထုပ် ငါပိုက်
Posted by laylwintlu at 09:463comments
မင်း သတိရလို့ တွေးတဲ့အခါ
မင်း ငြီးဆိုနေမယ့် သံစဉ်လေး
မင်း လွမ်းလို့ သီကုံးတဲ့ ကာရံ
မင်း ကြေကွဲလို့ငိုတဲ့အခါ
ဘာတွေဖြစ်ဖြစ် မင်းနဲ့ 
တမ်းတခြင်း ချစ်ခြင်းများနဲ့ 
ငါ့တို့ နှစ်ဦးနှလုံးသားတွေ အစဉ်နီးပါရစေ...
နေ့ နဲ့ ညကန့် သတ်ချက်ရဲ့ 
Posted by laylwintlu at 19:094comments
နှောင်ကြိုးတွေကိုမှ တိုက်စားတတ်တဲ့ လှောင်ရယ်သံ
အပြုံးနဲ့ ကျီစားသွားတဲ့ အမုန်းပန်းတွေ
အဲ့ဒီ့ရနံ့ ကိုမှ ရူးသွပ်မှုတွေနဲ့ နမ်းရှိုက်ခဲ့ရသူ
နာကျင်မှုနေ့ စဉ် ရက်စွဲတွေထပ်ထပ်နေပါစေ
နှလုံးသား ပုံဖမ်းကားတစ်ချပ် မျက်နှာပြင်မှာ
Posted by laylwintlu at 19:54 1 comments
ဘဝကို လင့်စင်ထိုး ခပ်ရိုးရိုးမျှော်နေတော့မယ်
ခပ်ရိုင်းရိုင်း လေပြေတစ်ဝက်နဲ့ 
မင်မခြောက်သေးတဲ့ ဒဏ်ရာတဝက်တပျက်နဲ့ 
ငါ့ဆီ နာမတစ်ခု အမှတ်မထင်ရောက်လာတယ်
အဲ့လိုသာ ပြည့်စုံနေရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။
ဗီဇနဲ့ ခံစားချက်မှာ ဘာရသ ဘာမှမရှိ..
ငါ့ကိုငါ ခပ်တင်းတင်းပဲ ငြင်းပါတယ်“မခံယူဝံ့ပါ”။
ခေတ်နဲ့ ဆိုင်နေလို့ 
အမှောင်ကြောက်လို့ချောင်ခိုလျှောက်ကာမှ
သဇင်ပန်းနဲ့စံပယ်ပန်း ရနံ့ နမ်းရှိုက်ခြင်းအတွက်
သင်ခန်းစာကို အခါခါ ငါမကြေခဲ့ဘူး။
ဝေဒနာတွေ ရထားတစ်စင်းသာ ဖြစ်လိုက်ပါတော့လား
ခံစားမှုသံစဉ်တွေ ဥသြသံလို သံရှည်စွဲရအောင်။
ခင်ဗျားတို့ ပဲ စဉ်းစားကြည့်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမှ ဓနဥစ္စာတွေနဲ့ ချောက်ချပြီး
မာနကိုမှ ဖိနပ်စီးချင်လို့ တဲ့...
မိုင်ထောင်ချီနေတဲ့ အတ္တ မာနတွေ
Posted by laylwintlu at 18:494comments
ခပ်မိုက်မိုက်နဲ့ရွက်လွှင့်
အချစ်ကို ဘဝလုပ် ပုဒ်စာတွေကိုထုတ်
မသေချာမှုရဲ့ နိဂုံး နောက်ဆုံးတော့
တွေ့ ဆုံမှုက စည်းမှန်းသိရင်
အလွမ်းသီဖို့ခံစားချက်တွေတောင်
ဘယ်နဲ့ ညာ မှားတတ်လာပြီ....
Posted by laylwintlu at 19:312comments
သံစဉ်နဲ့ စသားတွေလှလို့flashsong လုပ်ထားပါ။ပေးဆပ်ခြင်းနဲ့ 
အချစ်ကိုခံစားနေကြသူများအတွက် သီချင်းလေးက အားရစရာလေးပါ:)
Posted by laylwintlu at 17:552comments
၁။နေ့ စဉ်(၁၀)မိနစ်မှ မိနစ်(၃၀)ထိလမ်းလျှောက်ပါ။လမ်းလျှောက်နေစဉ်အတွင်း
၂။နေ့ စဉ် အနည်းဆုံး(၁၀)မိနစ်ခန့်ဘာကိုမှမတွေးပဲ ငြိမ်သက်စွာနေပါ။မနက်
အိပ်ယာထပြီဆိုတာနဲ့ပုံမှန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ဘယ်လောက် ပင်ပန်းအလုပ်ရှုပ်နေပါစေ ရရင်ရသလို (၇)နာရီပြည့်အောင်
၄။Eသုံးလုံးနဲ့အညီနေပါ။
၆။မနေ့ ကထက် ဒီနေ့ စာများများ ပိုဖတ်ပါ။
၇။တရားထိုင်ခြင်း၊ယာဂကျင့်ခြင်း စတာတွေအတွက် နေ့ စဉ်အချိန်ပေး
၈။သင့်ရဲ့ အချိန်တွေထဲက အနည်းဆုံးမိနစ်(၃၀)ခန့် ကို အသက်(၇၀)အရွယ်တွေနဲ့ 
အသက်(၆)နှစ်အောက် ကလေးငယ်များနဲ့အချိန်ဖြုန်းပေးပါ။
၉။နိုးနေတာထက် အိပ်မက်(စိတ်ကူး)များများ ယဉ်မက်ပါ။
၁၀။အသားများများစားတာထက် အသီးရွက် များများစားပါ။
၁၂။တစ်နေ့ မှာ အနည်းဆုံး လူ(၃)ယောက်ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးဖြစ်အောင်ပြုံးပြပါ။
၁၃။အတင်းပြောခြင်းနဲ့အချိန်တွေ မဖြုန်းမိပါစေနဲ့ ။
၁၄။အတိတ်အမှားတွေကို ပြန်အစမဖော်မိပါစေနဲ့ ။လက်ရှိအနေထားကစလို့ 
၁၅။သင်မလုပ်နိုင်ပဲနဲ့အဆိုးဘက်က မမြင်ပါနဲ့ ။အကောင်းဘက်မှာ သင်ကိုယ်တိုင်
ဆိုတာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းထဲက ပြဌာန်းချက်အပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်လို့ကျောင်းမှန်မှန်
တက်ပြီး ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ထိလေ့လာသင်ယူရင်း အလွယ်လေး ကျော်ဖြတ်
၁၇။မနက်မှာ ဘုရင်လိုစား၊နေ့ လည်မှာ မင်းသားလိုစား၊ညမှာ သူဖုန်းစားလိုစားပါ။
၁၈။လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ များများရယ်ပြီး များများပြုံးပါ။
၁၉။ဘဝဟာ သိပ်တိုတောင်းပါတယ်။အမုန်းတရားတွေနဲ့အချိန်မဖြုန်းပါနဲ့ ။
မုန်းနေတာတွေ ဆန့် ကျင်ဘက် လုပ်ကြည့်ပါ။
၂၀။အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါ အသည်းသန် အပူတပြင်းမလုပ်ပါနဲ့ ။ခေါင်းအေးအေးထားပြီး
၂၁။အငြင်းခုန်ကိစ္စတွေအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ သင့်အချိန်လေးတွေကို မဖြုန်းပါနဲ့ ။
၂၂။အတိတ်က ကိစ္စရပ်တွေအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ယူကြည့်ပါ။
၂၃။သင့်ဘဝကို အခြားတစ်ယောက်နဲ့မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့ ။
၂၄။သင့်ဘဝကိုပျော်ရွှင်လုပ်နိုင်တာ သင့်အပြင် တခြားလူမရှိဘူးဆိုတာ သိပါ။
၂၅။အရာရာတိုင်းအတွက် လူတိုင်းကိုခွင့်လွှတ်တဲ့စိတ်နဲ့မြင်ကြည့်ပါ။
၂၆။အခြားလူတွေ သင့်ကိုဘယ်လိုထင်မြင်နေပါစေ မဟုတ်ရင် သင်ခံစားမနေပါနဲ့ ။
၂၇။ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ဆိုးသည်ဖြစ်စေ လိုအပ်အချိန်တစ်ခုကို စောင့်ကြည့်ပါ။
၂၈။သင်နေမကောင်းဖြစ်နေလျင် သင့်သူငယ်ချင်း(သို့ )တစ်စုံတစ်ဦးက
၂၉။အသုံးမဝင်တော့တဲ့အရာတွေကို အမြန်ဖယ်ရှားပါ။လှလှပပနဲ့ ပျော်ရွှင်အောင်နေပါ။
၃၀။မနာလိုဝန်တိုခြင်းဆိုတာ အချိန်ဖြုန်းနေတဲ့ နည်းတစ်ခုပါ။
အမှန်တော့ အရာအားလုံးကို သင်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပြီဆိုတာကိုသတိရပါ။
၃၁။မကြာမှီ အကောင်းဆုံးတွေ သင့်ထံရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာ သိပါ။
၃၂။ခံစားမှုတွေများလို့မပြိုလဲသွားပါနဲ့ ။အမြန်ထ၊အမြန်ပြင်ဆင်ပြီး လန်းဆန်း
၃၄။မကြာခဏ မိသားစုနဲ့ ဝိုင်းဖွဲ့ စကားပြောပါ။
၃၆။နေ့ စဉ် တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီကိုပုံမှန်လက်ဆောင်ပေးပါ။
၃၇။အလုပ်ထဲ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲ အနစ်မွန်းခံပါ။
၃၈။သင်သိသမျှ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျှဝေပါ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှဖတ်စေချင်လို့ ပို့ ပေးထားတာပါ။အားလုံးနဲ့ 
အသုံးတည့် တာဖြစ်တာကြောင့် ပြန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by laylwintlu at 00:310comments
မနှိပ်နဲ့ လို့ တော့ပြောတာပဲ သူကလေ...နှိပ်ချင်သပါ့ဆိုလည်း နှိပ်သာနှိပ်သာနှိပ်လိုက်ပါ:P
Posted by laylwintlu at 23:540comments
လူတစ်ယောက်က မေးလ်ကိုလာအပ်ပြီး သီချင်းလုပ်ပေးပါလာဆိုလို့ 
လေလွင့်လည်းငြင်းလိုက်ပါတယ်:P ဘာသီချင်းလဲ ပြောပေါ့...
နှစ်ပုဒ်တည်းပါခင်ဗျတဲ့(တေပီဆာပဲ) flashsong ကစိတ်ကြိုက်ရဖို့ 
အချိန်ပေးရတာ သိပုံမပေါ်ပါဘူး လေလွင့်ကလည်း အလုပ်တဖက်နဲ့ 
ကူညီပေးလိုက်ပါတယ်..ချစ်သူများနေ့ အတွက်ဆိုလို့ :D
အော်..မေ့နေလို့ဒီသီချင်းကတင်ပြီးသားလေ ပိုပြည့်စုံအောင်
ထပ်ဖြည့်ချက်လေးတွေ ရှိနေလို့ လေ:P
Posted by laylwintlu at 20:250comments
ငုတွေက လှောင်ပြုံး ပြုံးတယ်
မဆုံနိုင်မှန်းကူးတဲ့မြစ် ဒေါင်လိုက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်
သံစဉ်တွေအော်ဟစ်ဖို့အားအင်တွေခြောက်ခြားနေတယ်
နေကွယ်မှာကြောက်လို့လရိပ်အောက်ခိုတော့ ကြယ်လေးတွေငိုနေကြတယ်..
ဟင်းလင်းပြင်ထက် ခြေလှမ်းတွေက ဒယိုင်းဒယိုင်...
ညခင်းမှာ ငါ့အလွမ်းနဲ့ စစ်ခင်းမယ်ဆို..
တာရာသလင်းက ကြယ်တစ်ခင်းက ငါ့ကို ကျီစားကုန်ကြပြီး..
မာယာမဲ့နှောင်ကြိုးတွေနောက် ကညာပျိုရဲ့အတ္တဓားတစ်စင်းက
အချစ်ကိုမှာ တစ္ဆေတစ်ကောင်လို လာလာပြီးခြောက်လှန့် တယ်
စွဲလန်းခြင်းအိပ်မက်နဲ့ ပြုစားတတ်တဲ့ ကဝေပျို ..
ငါ့ နိဂုံးဆိုတာ သူ့ လက်တစ်ဆုတ်စာ..
စမ်းတွေရဲ့ စီးဆင်းခြင်းမှာ ပူလောင်ခြင်းတွေမပါဘူး
ငါ့ရင်ထဲမှာလည်း မင်းအတွက်စွန့် လွှတ်ခြင်းတွေမပါဘူး
ဆန္ဒရှိသလိုနေပါ တားမြစ်ခြင်းဆိုတာ အချစ်မှာမပါဘူး...
အချစ်ပွဲက စစ်မက်နွဲသလို ထားရဲသူသာ နိုင်လိုကြေးလား..
ကြေကွဲခြင်းအတွက် နှစ်သိမ့်ဖို့ ဆုတစ်ခုတောင် ငါမမျှော်တော့ဘူး
အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာ အကုန်လုံး မင်းကိုပေးတယ်
မင်းပျော်ရဖို့အဓိပါ..
ယုံကြည်ချက်တွေ ကျီစားရင်း အရောက်မှာ
အချစ်ဆိုတာလည်း သတိထားရင်း ပျောက်ခဲ့တာ မဟုတ်လား.....
Posted by laylwintlu at 03:043comments
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်က ကျွန်တော်ဆီလူတစ်ယောက် ဘယ်ကနေမျက်စိလည်ပြီး
အကောက်ကိုလာအပ်လည်းမသိပါဘူးဗျ။သူကပြောတယ် “အကိုက သီချင်းတွေလုပ်
ပေးတယ်ဆို...ကျွန်တော်ကို ကူညီပေးပါ”တဲ့...ကဲကောင်းရော.ဘာပြောရမလဲ မစဉ်း
ချစ်သူများနေ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုပေးချင်လို့ ပါတဲ့...(ဟဲ..ဟဲ..)
နှစ်ပုဒ်ထဲပါတဲ့....မောင်လေလွင့်လည်း ဒါမျိုးဆို ရှေ့ဆုံးကလေ :P
မတောက်တခေါက်တတ်ထားတာလေးနဲ့လာထားပေါ့ :D...လုပ်တော့ပြီးသွားပြီ
ကိုယ်တော်ချောတော့ စိတ်တိုင်းကြ မယ်ထင်ပါတယ်..
Posted by laylwintlu at 18:52 1 comments
ငါလည်းမမှား မင်းလည်းမှန်တဲ့ ဒီအဖြစ်မှာ
အချစ်က ပိန်ပေါ်ရေမတင် အဖြစ်တွေပါ...
ပေးဆပ်မှုတွေ အခါခါ ငါသာရင်ကွဲခံပါ့မယ်
မချစ်မမုန်းတဲ့အသုံးတွေကြား မင်းလည်းပဲပြုံးမပြပါနဲ့ တော့
အဆုံးဆိုတာ တစ်နေ့ တော့ရှိကြမြဲ မဟုတ်လား...
ငါ့အပေါ်သာ နာကျဉ်းပြီး မုန်းပေးပါ...
မထိုက်တဲ့ပန်း စိုက်ခဲ့ပြီး နမ်းချင်ခဲ့တာ
အလွမ်းဆင့်မှာ မတန်မှန်းသိတဲ့ လူ...
ဆုံးဆည်းခြင်းတွေ အမှတ်တရ ငါ့ရင်ထဲမှာပွားနေတယ်
အမြင့်ကပန်း ပွင့်လန်းခြင်းအောက် ရနံ့ မပျောက်ဖို့အဓိကလိုတာ..
ငါ.. ဒွိဟတွေကြား ခိုနားနေဖို့မသင့်ပါဘူး...
Posted by laylwintlu at 05:43 1 comments
အညာရယ် တစ်ခါကွယ် ပြန်ကာလွမ်းတော့...
ဆူးပုတ်ဝယ် ပဲကြီးခတ်၊ခရမ်းချဉ်ချက် နီစပ်စပ်
ပူလေတယ် ဖြူလေတဲ့ ထမင်း အာခေါင်ကယ်သွင်းလို့လွေး...
မိုးမျှော်က အာကိုလောင်လို့ 
လက်ဖက်ရည်ကြမ်း၊ထန်းလျက်ခဲနှင့်ပဲလှော်ကြီးတို့ကူးရတယ်လေး...
အရှေ့ ကယ်မျှော် ညို့ ကာမှိုင်း ရိုးမရိုင်းက သိုင်းထားတယ်
ရှု့ ချင်ဖွယ် မျှော်ကယ်မဆုံး ပျိုးခင်လယ် စာကယ်ခြောက်
ခပ်တောက်တောက်နဲ့ကိုစာခြောက်...
သေလ္လာခြေ မာလာဖူးရယ် မျစ်ဦးငယ်တူးပါလို့ 
ပင်ညောင်ချဉ် ဖူးရစ်ကယ် ပုရစ်ဖူး
တို့ အညာ ထိုအင်တောမှ ဖက်ခုတ်ခဲ့ ပြန်ချိန်(နေ)စောင်းလို့ 
ခွေးပိန်ငယ် လျှာတလှပ်လှပ် သခင်အပါးယဉ်ကယ်ပါးထပ်ချက်ပေါ့လေ
ကြံစုန်နွား ပြေးလမ်းတဆုံး ဖုန်လုံးတွေလည်းလိမ့်လို့ ရယ်
ခြူသံမြိန် မိုးထိစွန့် မလေး ပြေးကြပေါ့လေး....
ပင်ဇီးဖြူ ညှာတံပွတ်၊ပန်းစကားတို့အလှကြွယ်
အရိုင်းငယ်တောင်ငယ်ပန်းရယ်နှင့် ဆွတ်ပျံ့ ဖွယ်
ပန်းချီမှုန်း သီကုံးရယ်မှီစာကိုစီ တုမနိုင်ပါ့မလေး
ပင်လက်ပံ ခြေအောက်ရင်းက ပွင့်ခင်သဏ္ဍာန်
ပျော်ရွှင်ရွယ်မြူး ဆိုသီကြူးကာ ဝတ်ရည်ကိုငုံကြတယ်
ပင်လက်ပံ တောင်ကိုင်းဖျားက ပျားကယ်ပုံ အုံကြတယ်
အမောထူ တောသူလေအား လေပြေကူ ထူကာပေးလို့ 
ဆည်းလည်းသံ တချွမ်ချွမ်နှင့် တောင်ပေါ်မှာ စေတီသာအား
တနောင်း၊ဇီး၊မကျဉ်းနှင့် ဆူးပင်ကများ လေတွေရူးတဲ့
ဒီလရယ် တန်ခူးမှာက ခံစားလွယ် စကားမကြွယ်သူမှာ
Posted by laylwintlu at 18:513comments
အညီမျှတွေးဖို့အချီချနှေးတဲ့
ညီမလေးကိုပေးလို့အိပ်တွေရက်ရှည်ခဲ့ပြီ..
ဆုံဆည်းခွင့်တွေ ပိုင်ဆိုင်ဆွတ်ယူဖို့ 
ညီမလေးနဲ့ အတူ ထာဝရနစ်မြှပ်ခွင့်ပေးပါလား....
ရင်ဘတ်ဌားရေးဖွဲ့ထားပါသည်။)
Posted by laylwintlu at 22:445comments
ဘာဖြစ်လို့ရှိုက်သံသဲ့သဲ့က
သတ်မှတ်ချက်ရဲ့စံတော်ချိန်မျဉ်းဆိုတာ မတူမှတော့
ငါတို့ နှစ်ဦး ဆန့် ကျင်ရာသာ ဦးတည်ကြစို့ ...
ကျောခိုင်းရုံလောက်နဲ့ဆန္ဒတွေကုန်မယ်လို့ 
အချစ်ဆိုတဲ့ အရာက လေးကလွှတ်တဲ့မြှားလိုပဲ
လွှတ်ပစ်ဆဲဆဲ သံယောဇဉ်တွေ ပြန်ယူထားပါကွာ...
အဲ့ဒီ့အရိပ်အောက် ငါ့တို့ နှစ်ယောက်အတူရှိသင့်ပါတယ်.......
Posted by laylwintlu at 21:522comments
အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများ (1)
'ယခုလတွင် ရေးသားခဲ့သမျှ ပိုစ်များ
သတင်းကွန်ယက်: ပီနန်မြို့မှ မောင်ဇင်အောင်စိုး၏ ကျန်...
Tha thi Ya nya Nay Khinn သတိရညနေခင်း - Zay ye Fea...
Pag-ibig - Yeng Constantino (Guitar Tutorial + Lyr...
Jennifer Lopez - Dance Again (Lyric Video) ft. Pit...
Academic Earth အွန်လိုင်းဗီဒီယိုပညာရေး
ဖွံ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်University of the People
နည်းပညာ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ ဒီဇိုင်း ပညာ
စိတ်ကြိုက် ringtone ရှာဖွေရန်
Team Viewer ဒေါင်းလော့ယူရန်
My thougt စာပေ
All -channel အဘိဓာန်နှင့်လေ့လာစရာများ
တစ်ပတ်အတွင်း လူဖတ်အများဆုံး ခေါင်းစဉ်များ
" မြန်မာရွာ" စားသောက်ဆိုင် (kuala ...
1. ပထမဆုံးသမ္မတ= စဝ်ရွှေသိုက် 2. ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်= ဦးနု 3. ပထမဆုံးအနောက်တိုင်းဆေးဒေါက်တာ = ဒေါက်တာ ရှောလူး ... 4. ပထမဆုံးဘိဓာန် ရေးသားသူမျ...
ငွေ(၃၀၀)ကျပ်နဲ့ဖင်ပူအောင်မထိုင်ခဲ့ရသမျှ ဟောဒီ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ငွေ(၃)ကျပ်နဲ့(၂၄)နာရီအကြိုက်သုံးရတဲ့ အွန်လိုင်း.. ပေါလိုက်တဲ့ Laptop.....
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်က ကျွန်တော်ဆီလူတစ်ယောက် ဘယ်ကနေမျက်စိလည်ပြီး အကောက်ကိုလာအပ်လည်းမသိပါဘူးဗျ။သူကပြောတယ် “အကိုက သီချင်းတွေလုပ် ပေးတယ်...
လေးဖြူသီချင်းတွေကိုငယ်ငယ်ကတည်းကနှစ်သက်ခဲ့တာပါ Flsahsong လုပ်တတ်လာတော့လေးဖြူသီချင်းတွေကိုဦးစား ပေးလုပ်ထားတာပါ.... သီချင်းလေးနားဆင်ရန်...
"ကိုယ်ထင် ကုတင်ရွှေနန်း"တဲ့.... မရင့်ကြတ်သေးတဲ့ ကျွန်တော်ဘဝရယ် အဖြစ် အပျက်တွေကြား သံသရာလည်.. ဆယ်ရင်း မျော၊လှော်ရင်း နစ် အချစ်န...
ငါ့ ကိုမှကြည့်လို့ မရတဲ့ နင် နင့် ကိုမှကြည့်လို့မဝတဲ့ ငါ နှစ်ဦးကြားပြိုင်မျဉ်းနှစ်ကြောင်း ဘယ်တော့မှမဆုံဘူးလို့နင် ပြောခဲ့ပေမဲ့...
သတင်းကွန်ယက်: ပီနန်မြို့မှ မောင်ဇင်အောင်စိုး၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ေ... : ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၅ ရက်နေ့က မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ပီနန်မြို့သို့ လာရော...
ဘာမှလည်း မမြဲဘူး... မုန်တိုင်းကြား တွဲလက်တစ်စုံ လေဆန်အောက် ခိုဝင်နားခိုက် ကြယ်ကြွေ ညဉ့်နက်နက်ရဲ့ရှိုက်သံတွေ အမှီပြုရင်း အလှပဆုံးတေးသွား...
လေလွင့်လူ. Powered by Blogger.